KwiChina Abavelisi beengcingo kunye nabaxhasi | Ixesha elide
Ukujija kunye ne-Anchor
Ucingo oluhlabayo kunye nocingo lweRazor
Yenziwe ngocingo lwekhabhoni yentsimbi ekhethiweyo, ngocingo lokuzoba, ukuhlamba iasidi kunye nomhlwa ekususeni, ukuqinisa kunye nokubopha. Isetyenziselwa kakhulu ukwakha, imisebenzi yezandla, umnatha wocingo, indlela yokubonisa indlela yokubiya, ukupakisha kweemveliso kunye nokunye ukusetyenziswa kwemihla ngemihla.
Uluhlu lobungakanani: BWG 8-BWG 22
Ingubo yeZinc: 45-180g / m2
Uqine: 350-550N / mm2
Kushushu nkxu wire yentsimbi kwalenza
Yenziwe ngocingo lwekhabhoni yentsimbi ekhethiweyo, ngomzobo wocingo, ukuhlanjwa kweasidi kunye nomhlwa ekususeni, ukuqinisa kunye nokubopha.
Isetyenziselwa kakhulu ukwakha, umsebenzi wezandla, umnatha wocingo, indlela yokubonisa indlela yokubiya, ukupakisha kweemveliso kunye nokunye ukusetyenziswa kwemihla ngemihla.
Ingubo yeZinc: 45-260g / m2
Ucingo Electro kwalenza intsimbi
Ucingo Electro iqaqanjiswa yentsimbi senziwe ukhetho sentsimbi wobulali, ngokusebenzisa ucingo umzobo, ucingo galvanizing kunye nezinye iinkqubo. Electro wire yentsimbi kwalenza uneempawu zokwaleka zinc ashinyeneyo, nokumelana elungileyo, zinc zinc ukutyabeka, njl Kusetyenziswa ikakhulu kulwakhiwo, ukuvakalisa indlela ukubiya, ukubopha kweentyatyambo kunye wocingo ukwaluka.
Ingubo yeZinc: 10-18g / m2
Isefu yentsimbi Ingcaciso
Ucingo oluNtsundu oluMnyama:: Black annealed ucingo ubukhulu becala kusetyenziswa ucingo mveliso, ucingo zokwakha, bale bale mveliso ucingo kunye tie ucingo ucingo njl
Ukucaciswa kweFowuni eNtsundu emnyama
PVC Camera Wire:Ngokuqhubekeka okunzulu, iplastiki kunye nentsimbi yentsimbi kwalenza ngokudibeneyo, kunye nokuguga, anti-umhlwa, anti-ukuqhekeka kunye nezinye izinto.
8 I-4.05mm 4.99mm
10 3.25mm Ubungakanani:
26 0.6mm 0.70mm
Intambo yeCoil encinci: Intambo encinci yekhoyili yintsimbi yentsimbi emva konyango lomphezulu, kukho ipleyiti enkulu yesilika kwintambo encinci yekhoyili, ubunzima bolawulo oluncinci lokusongela ucingo kwi-1-2.2 kg okanye njalo, ekusebenzeni ngenqwelomoya kulula ngakumbi ukuqhuba.
© Copyright - 2019-2020: Onke amalungelo agciniwe. Imveliso eshushu - Imephu yendawo